वीपी प्रतिष्ठानमा ‘लूट्न कान्छा लूट’ कहिलेसम्म ? – Makalukhabar.com
२०७५ फागुन १० गते २:२८
पशुपति शर्माको गीत गाएर कम्युनिष्ट सरकारको धज्जी उडाउने कांग्रेसीहरु वीपी प्रतिष्ठानमा आफ्नै पार्टीका उपकुलपतिले मच्चाएको लूटतन्त्रको चूँ सम्म नबोल्दा कांग्रेसका इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरुविच अन्योलता सृजना भएको छ । सरकारलाई भ्रष्टाचारी र अधिनायकवादी देखेका कांग्रेसीहरुले आफ्नै उपकुलपतिले दुई वर्षदेखि मच्चाएको लूट किन नदेखेका होलान् ?
देउवाले क्याविनेटबाट उपकुलपति रौनियारलाई वर्खास्त गर्न लाग्दा देउवा पत्नी आरजुका सेट्टिङ्ग माष्टर सांसद उमेश श्रेष्ठले डा. रौनियारलाई जोगाएका थिए । बोहरा पछि दुई तिहाईको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी पद्मा अर्यालले समेत डा. रौनियारलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री ओली समक्ष कुरा राखिन् ।
त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फुलमन्त्री भएर आए संघिय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव । मधेसी मूलको स्वास्थ्य मन्त्री भएकोले ‘जोडी जम्ने भो’ भन्दै भन्दै डा. रौनियारले प्रतिष्ठानमा झन् लूटतन्त्र मच्चाए । यहाँसम्मकी प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठका सबै अधिकार खोसेर उनलाई ‘पेण्डुलम’ बनाइदिए ।